राती दाह संस्कार किन नगर्ने ? गरे के हुन्छ ? - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
हिन्दु धर्ममा करिब १६ वटा संस्कार बताइएको छ । यसमा सबैभन्दा अन्तिम संस्कार मृतक संस्कार हो । यसपछि कुनै अन्य संस्कार हुँदैन, यसैले पनि यसलाई अन्तिम संस्कार भनिन्छ । शास्त्रका अनुसार शरीर पञ्च तत्व अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नी, वायु र आकाशबाट बनेको हुन्छ । अन्तिम संस्कारको रूपमा जब व्यक्तिको दाहसंस्कार गरिन्छ, तब पाँचवटै तत्व जहाँबाट आएका थिए त्यही बिलिन हुन्छन् र पुनः नयाँ शरिर पाउने अधिकारी बन्ने गर्छन् ।
अन्तिम संस्कारविधीपूर्वक नहुँदा मृतकको आत्मा भट्किने गर्छ । किनकी ती पाँच तत्वलाई न त पृथ्वीमा ठटाऊँ मिल्छ न त परलोकमा, यसकारण उनीहरू बीचमा नै रहन्छन् । यस्ता व्यक्तिको आत्मा प्रेतलोकमा जाने गर्छ । यसैले व्यक्तिको मृत्यु भएपछि विधीपूर्वक उनीहरुको दाह संस्कार गर्ने गरिन्छ ।तर, कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएपछि जतिबेला पनि दाहसंस्कार भने गर्न नहुने बताइन्छ । यसका लागि शास्त्रमा दाह संस्कारका केही नियम बनाइएको हुन्छ ।तीमध्येको एक हो, कुनै व्यक्तिको मृत्यु राती या साँझ परेपछि भयो भने उक्त व्यक्तिको अन्तिम संस्कार बिहान सुर्योदयदेखी सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिले गर्नुपर्छ । सूर्यास्त भएपछि दाहसंस्कार गर्नु शास्त्र विरूद्ध मानिन्छ ।
यदी कुनै व्यक्तिको मृत्यु दिऊँसो हुन्छ भने उक्त व्यक्तिको दाहसंस्कारसूर्यास्त भन्दा पहिले नै गर्नुपर्छ । साँझ परेपछि दाहसंस्कार गर्न हुँदैन ।शास्त्रका अनुसार सूर्यास्तपछि शवको अन्तिम संस्कार गर्न नहुनुको कारण के हो भने सूर्यास्तपछि यदी अण्तिम संस्कार गरियो भने दोष लाग्ने गर्छ ।
यसले मृतक व्यक्तिलाई परलोकमा कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ जन्ममा उसको कुनै अंगमा खराबी देखीन सक्छ । अर्को के मान्यता छ भने सूर्यास्तपछि स्वर्गको ढोका बन्द हुन्छ र नर्कको ढोका खुल्छ ।
यस्तै, यस विषयमा अर्को मत के छ भने सूर्यलाई आत्माको कारक मान्ने गरिन्छ । सूर्य नै जीवन र चेतना हो । आत्माले सूर्यबाट नै जन्म लिन्छ र सूर्यमा नै बिलिन हुन्छ । सूर्य नारायण रूप हुन् र सबै कर्मलाई हेर्ने गर्छन् ।
रातको समय राक्षसी शक्ति बलियो हुन्छ, जसले मुक्तिको बाटोमा व्यवधान खडा गर्न सक्छ । यसै कारण शास्त्रमा साँझ या रात परेपछि यदी कै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने मृतक व्यक्तिको दाह संस्कार नगर्ने बताइएको हो ।यदी कसैको राती या साँझ परेपछि मृत्यु हुन्छ भने उसको मृत शरिरलाई तुलसीको मठ नजिकै राख्ने र शवको वरिपरी दियो बाल्ने गर्नुपर्छ । शवलाई राती कहिल्यै पनि एक्लै छोड्नु हुँदैन ।मृत व्यक्तिको आत्मा आफ्नो शरिरको नजिकै घूम्ने हुनाले र आफ्नो परिवारको व्यवहार हेर्ने हुनाले शवको नजिकै बसेर भगवान् प्रार्थना गर्ने गर्नुपर्छ । यसले मृतकको आत्मालाई शान्ति मिल्छ ।
शवलाई एक्लै छोड्दा उक्त शरिरमा मृत व्यक्तिको आत्मा हुँदैन, जसले गर्दा मृत व्यक्तिको शरिर खाली घर जस्तै हुन्छ । खाली घरमा जो पनि छिर्ने सक्ने जस्तै खाली शरिरमा जसको पनि आत्मा छिर्न सक्छ । उक्त आत्मा खराब आत्मा पनि हुन सक्छ । यसैले शरिरलाई खराब आत्माबाट बचाउनका लागि पनि शवको नजिकै बस्नुपर्छ । व्यवहारिक रूपमा पनि कुनै जीवले हानी नपुर्याओस् भन्नका लागि शवको नजिकै बस्नुपर्छ ।
भरणी नक्षत्र के कस्तो हो त?